Ihe A Chọrọ n’Aka Onye Chọrọ Ịbụ Onye Na-eso Ụzọ Jizọs | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cibemba Croatian Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
IHE ONYE CHỌRỌ ỊBỤ ONYE NA-ESO ỤZỌ JIZỌS GA-EME
Jizọs akụziela ihe ndị bara uru n’oge ọ na-eri ihe n’ụlọ onyeisi ndị Farisii. Ka Jizọs nọ na-aga Jeruselem, ìgwè mmadụ so ya na-aga. Gịnị mere ha ji soro ya? Ọ̀ bụ n’ihi na ha chọrọ ịbụ ndị na-eso ụzọ ya n’eziokwu n’agbanyeghị ihe ọ ga-efu ha?
Ka ha nọ na-aga, Jizọs kwuru ihe nwere ike ịwụ ụfọdụ n’ime ha akpata oyi n’ahụ́. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla abịakwute m ma ọ kpọghị nna ya na nne ya na nwunye ya na ụmụ ya na ụmụnne ya ndị ikom na ụmụnne ya ndị inyom asị, ee, kpọọkwa ọbụna mkpụrụ obi ya asị, ọ pụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m.” (Luk 14:26) Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara?
Jizọs anaghị ekwu na Ndị Kraịst ga-akpọ ndị ikwu ha asị. Kama, ihe ọ na-ekwu bụ na ha ga-ahụ yanwa n’anya karịa ha. Ha ekwesịghị ịdị ka nwoke ahụ o ji mee ihe atụ gbasara nri anyasị, bụ́ onye jụrụ ịza òkù a kpọrọ ya n’ihi na ọ ka lụrụ nwaanyị ọhụrụ. (Luk 14:20) Baịbụl kwuru na nna ochie ndị Juu aha ya bụ Jekọb “kpọrọ Lia asị” ma hụ Rechel nwanne ya n’anya. Nke a pụtara na ọ hụrụ Rechel n’anya karịa Lia.—Jenesis 29:31.
Buru n’obi na Jizọs kwuru na onye na-eso ụzọ ya ga-akpọ “ọbụna mkpụrụ obi ya [ma ọ bụ ndụ ya] asị.” Nke a pụtara na ezigbo onye na-eso ụzọ Jizọs ga-ahụ Jizọs n’anya karịa otú ọ hụrụ ndụ nke ya n’anya. Ọ ga-adịdị njikere ịnwụ n’ihi Jizọs. O doro anya na mmadụ ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs abụghị obere ihe. Mmadụ kwesịrị iche ya eche tupu ya abụrụ onye na-eso ụzọ Jizọs.
Mmadụ ịbụ onye na-eso ụzọ Jizọs nwere ike ime ka ihe siere ya ike ma ọ bụkwanụ ka a kpagbuo ya. Ọ bụ ya mere Jizọs ji kwuo, sị: “Onye ọ bụla nke na-adịghị eburu osisi ịta ahụhụ ya ma na-eso m apụghị ịbụ onye na-eso ụzọ m.” (Luk 14:27) N’eziokwu, ezigbo onye na-eso ụzọ Jizọs ga-adị njikere idi mkparị otú ahụ Jizọs diri. Jizọs kwudịrị na ndị iro ya ga-egbu ya.
N’ihi ihe ndị a, ìgwè mmadụ ahụ só Jizọs na-eme njem kwesịrị ịtụle nke ọma ihe mmadụ ịbụ onye na-eso ụzọ Kraịst pụtara. Jizọs meere ha ihe atụ gosiri na ọ bụ ihe ha kwesịrị ime. Ọ sịrị: “Dị ka ihe atụ, ọ̀ dị onye n’ime unu nke chọrọ iwu ụlọ elu, nke na-agaghị ebu ụzọ nọdụ ala gbakọọ ihe ọ ga-efu, ka o wee hụ ma ò nwere ihe ga-ezu iji wuchaa ya? Ma ọ́ bụghị ya, o nwere ike ịtọ ntọala ya ma ọ gaghị enwe ike iwucha ya.” (Luk 14:28, 29) N’ihi ya, tupu ndị ahụ ha na Jizọs so aga Jeruselem aghọọ ndị na-eso ụzọ Jizọs, ha kwesịrị ibu ụzọ kpebisie ike na ha ga-ebu ibu dị na ya. Jizọs mekwaara ha ihe atụ ọzọ gosiri na ọ dị mkpa ka ha mee otú ahụ. Ọ sịrị:
“Olee eze nke na-aga ibuso eze ọzọ agha, nke na-agaghị ebu ụzọ nọdụ ala gbaa izu ma ò nwere ike iji puku ndị agha iri lụso onye ji puku ndị agha iri abụọ na-abịa imegide ya ọgụ? N’ezie, ọ bụrụ na ọ pụghị ime otú ahụ, mgbe onye ahụ ka nọ n’ebe dị anya, ọ na-ezipụ ìgwè ndị nnọchiteanya wee rịọ ya ka ya na ya mee udo.” Jizọs kwuziri, sị: “N’ụzọ dị otú ahụ, n’ezie, ọ dịghị onye ọ bụla n’ime unu nke na-ahapụghị ihe niile o nwere nke pụrụ ịbụ onye na-eso ụzọ m.”—Luk 14:31-33.
Ọ bụghị naanị ndị ahụ só Jizọs na-aga Jeruselem ka ihe a o kwuru gbasara. Ndị niile mụtara gbasara Kraịst kwesịrị ịdị njikere ime ihe a o kwuru. Nke a pụtara na ha chọọ ịbụ ndị na-eso ụzọ ya, ha ga-adị njikere ịhapụ ihe niile ha nwere, ya bụ, ihe onwunwe ha, kwetakwa ịnwụ n’ihi Kraịst. Mmadụ kwesịrị ichebara ya echiche ma kpee ekpere gbasara ya.
Jizọs kwughachiri ihe o kwutụrụ okwu ya mgbe ọ nọ n’elu ugwu na-ezi ìgwè mmadụ ihe. O kwuru na ndị na-eso ụzọ ya bụ “nnu nke ụwa.” (Matiu 5:13) Ọ ga-abụ na ihe Jizọs na-ekwu bụ na otú ahụ nnu na-eme ka ihe ghara imebi bụ otú ndị na-eso ụzọ ya ga-esi na-enyere ndị ọzọ aka ka ha ghara imebi omume ọma ha nakwa ka ha na Chineke nọgide na-adị ná mma. Ugbu a Jizọs jechawara ozi ya, o kwuru, sị: “N’ezie, nnu dị mma. Ma ọ bụrụ na nnu adịkwaghị atọ ụtọ, gịnị ka a ga-eji mee ka ọ dị ụtọ?” (Luk 14:34) Ụfọdụ ndị nụrụ ihe a o kwuru maara na ụfọdụ nnu ndị e nwere n’oge ahụ adịghị ọcha n’ihi na ájá na ihe ndị ọzọ si n’ala na-adị na ya. Ọ bụrụ na ụtọ ya apụọ, e nweghịzi ihe a ga-eji ya mee.
Jizọs ji ihe atụ a gosi na ndị bụ́ ndị na-eso ụzọ ya kemgbe ekwesịghị ịkwụsị iso ya. Ọ bụrụ na ha akwụsị, e nweghịzi ihe a ga-eji ha eme, otú ahụ a na-enweghịzi ihe e ji nnu ụtọ ya pụrụ eme. Ndị mmadụ ga-eji ha mere ihe ọchị. Nke ọzọ bụ na Chineke agaghịzi eji ha arụ ọrụ, ha nwedịrị ike ime ka e kwuluo Chineke. Jizọs mere ka a ghọta na anyị ekwesịghị ikwe ka ụdị ihe a mee. Ọ sịrị: “Onye nwere ntị ige ntị, ya gee ntị.”—Luk 14:35.
Jizọs kwuru na ndị na-eso ụzọ ya ‘ga-akpọ ndị ezinụlọ ha asị,’ kpọọkwa ‘mkpụrụ obi nke onwe ha asị.’ Gịnị ka ihe a o kwuru pụtara?
Gịnị ka Jizọs na-akụziri anyị n’ihe atụ o mere banyere iwu ụlọ elu na eze nke chị ndị agha ya na-aga agha?
Gịnị ka Jizọs ji ihe o kwuru gbasara nnu kụzie?